आज अचानक धेरै मुलुकमा किन डाउन भयो इन्टरनेट ? खुलेनन् धेरै बेवसाइट र एप — Imandarmedia.com
आज अचानक धेरै मुलुकमा किन डाउन भयो इन्टरनेट ? खुलेनन् धेरै बेवसाइट र एप
काठमाडौं । बिहीबार विश्वका धेरै मुलुकमा इन्टरनेटले अचानक काम गर्न छाड्यो । जसको कारण धेरै वेबसाइटहरु र मोबाइल एप चलेका थिएनन् । यी वेबसाइटहरु खोल्दा डीएनएस एरर देखाएको थियो । यसको अर्थ मानिसहरुले कमाण्ड वेबसाइटसम्म पुगेको थिएन ।
समस्या देखिएका वेबसाइटमा अमेजन, पेटीएम, डिज्नी, हटस्टार, एयरबीएनबी, यूपीएस, एचएसबीसी बैंक, ब्रिटिश एयरवेज र प्लेस्टेसन नेटवर्क सामेल छन् । यो समस्या डीएनएस सेवा प्रदायक अकामाईको डीएनएस सेवामा देखिएको गडबडीको कारण उत्पन्न भएको हो ।
डीएनएसको अर्थ डोमेन मेन सिस्टम हो । यो इन्टरनेटको फोनबुक हो । यो डोमेन नेमले कुनै कम्प्युटरको आईपी एड्रेससँग जोड्छ जसको कारण तपाईंले कुनै पनि वेबसाइट हेर्न सक्नुहुन्छ ।
अकामाईले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत प्राविधिक समस्या सुल्झाइएको जानकारी दिएको छ । पछिल्लो दुई महिनामा दोस्रोपटक ठूलो संख्यामा इन्टरनेट सेवामा अवरोध देखिएको हो । यसैबीच जापानको राजधानी टोकियोमा हुन लागेको ओलम्पिक प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहमा १५ राष्ट्र र सङ्गठनका प्रमुख सहभागी हुने भएका छन् ।
प्रतियोगिताका आयोजकहरुले ७० देशका खेलकुद मन्त्री पनि सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको बुधबार जानकारी दिएका छन् । जापानको मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख सचिव कात्सुनोबु कातोले पत्रकारहरुसँग भने, “१५ देश र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका प्रमुखहरुसँगै ७० देशका खेलकुद मन्त्रीहरु उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुने देखिएको छ ।”
शीर्ष नेताहरुको उपस्थीतिलाई आफूहरुले उच्च महत्वका साथ लिएको र त्यसलाई महामारीको विषयमा छलफल गर्ने अवसरको रुपमा समेत उपयोग गरिने उनले जानकारी दिए ।
महामारीले विश्वभरी पारेको असर र त्यसको सामनाका लागि अपनाउनुपर्ने उपाय, राम्रा अभ्यास, अनुभव र सहयोग आदान प्रदानका सन्दर्भमा पनि नेताहरुको उपस्थिति उपलब्धिमूलक हुने आयोजकहरुले अपेक्षा गरेका छन् ।
अघिल्लो वर्ष नै हुनुपर्ने टोकियो ओलम्पिक–२०२० कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण एक वर्ष ढिला गरी अहिले हुन लागेको हो । प्रतियोगिता यही जुलाई २३ मा सुरु भई आगामी अगस्ट ८ मा सकिने तय भएको छ । प्रतियोगिताका लागि लाखौँ खेलाडी तथा खेल पदाधिकारीहरु अहिले टोकियो पुगिसकेका छन् ।
प्रतियोगितामा कोरोनाभाइरस नफैलियोस् भन्ने उद्देश्यले उच्च सतर्कता अपनाइएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । एजेन्सीहरुको सहयोगमा